Sheekh Xasan Daahir Aweys oo la wareystay isagoo xabsi guri ku ah Muqdisho. – Xeernews24
Sheekh Xasan Daahir Aweys oo la wareystay isagoo xabsi guri ku ah Muqdisho.
Hogaamiyihii Ururka Xisbul Islam Xasan Daahir Aweys; oo ku jira gacanta dawladda Feederaalka Soomaaliya,ayaa markii ugu horeysay muddo afar sanno wareysi lala yeeshay isagoo ku jira xabsi guri.
Xaaladda Shiikh Xasan ayey sheegtay saxafiyadan inay aad u wanaagsan tahay sidoo kalana uu xabsi guri kula nool yahay xaasaskiisa iyo carruur gaadheyso ilaa 28 qof, Shiikh Xasan Daahir Aweys ayaa gacanta dowlada feederalka Soomalaaliya ku jira tan iyo sanadkii 2013 xilligaa oo ay oday dhaqameedyada beesha uu ka soo jeedo iyo dowlada ay ku heshiiyeen in dowlada loo soo gacan geliyo kadib markii uu ka soo cararay ururka Alshabaab.
Aweys ayaa si qoto dheer uga hadlay taariiqdiisa Maxkamadaha Islaamiga iyo Alshabaab oo ugu dambeyntii ay hogaamiyaasheeda ay is khilaafeen.”Toban sano kahor waxaan aaminsanaa in Soomaliya aan dhisi karo,balse maanta dowlada waa mid burbur ah,”ayuu yidhi Shiikh Xasan.
Saxafiyadan ayaa sheegtay inay aamisan tahay Xasan Daahir aan la saari karin maxkamad iyadoo lagu eedeynayo inuu yahay argagaxiso sababo la xidhiidha beesha uu ka soo jeedo ee Hawiye,waxayna dowladii hore ka baqday in haddii dambi lagu helo oo dil lagu xukumo cawaaqibka ka dhalan kara.
“Isku cadow ayaan ahayn Alshabaab sidaas ayaana qasabtay in aan hal meel uga soo wada jeesano la dagaalanka dowlada.”ayuu yidhi Xasan Daahir.
Ugu dambeyntii Shiikh Xasan ayay weydiisay saxafiyadan inuu haysto fikirkiisii toban sanno kahor balse waxa uu ugu jawaabay inay iyadaba ka jawaabto su’aashaas.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/03/xasan1.jpg 427 640 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-03-11 11:22:122017-03-11 11:22:46Sheekh Xasan Daahir Aweys oo la wareystay isagoo xabsi guri ku ah Muqdisho.
Suxufiyiinta SL ka Hawlgala waxaa Haysta arag,Maqal oo Ha faafin. Daawo Muqdisho oo ka soo kaban Hooggi iyo Halaagi soo Maray